Hurumende inonzi yabvuma kuti bbhiri rezvekuburitswa kwemashoko, reZimbabwe Media Bill, rinopa masimba akawanda kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko.
Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill muHarare paine mashoko ekuti hurumende yabvuma kuti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rezvekuritswa kwemashoko uye yave kuzoshandura zvimwe zvikamu zvebhiri iri risati raenda pachidanho chinotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuritswa kwemashoko, VaPrince Dubeko Sibanda.
VaSibanda vaudza vanhu vapinda musangano waitwa muHarare kuti munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana, vakatoudza komiti iyi kuti bhiri iri rave kushandurwa zvichitevera zvichemo zvakabva kune veruzhinji pamwe nekomiti yeparamende, yeParliamentary Legal Committee.
VaSibanda vati kana bhiri iri richinge rashandurwa zvimwe zvikamu zvaro, vachasangana zvakare navose vane chekuita nebhiri iri kuti vazeye zvikamu izvi bhiri iri risati razeiwa muparamende.
Vati vanofara chose kuti vanhu vakawanda vakapinda mumisangano yavakaita mumatunhu akawanda munyika vakaratidza chido chekuti mitemo yezvekutapwa nekuburitswa kwemashoko, ivandudzwe.
Asi vamwe vapinda mumusangano uyu, VaChris Mhike, vanove mutapi wenhau zvakare vari gweta, vati kunyange hazvo misangano yakaita seuyu yakanaka, zvinosuwisa kuti nguva zhinji pfungwa dzevanhu hadzipinzwi mumitemo inogadzirwa neparamende.
VaMhike vaudza Studio7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kana hurumende ikagadzirisa zvinhu zviri kuchemwa nazvo nevanhu pabhiri iri risati ratanga kuzeiwa muparamende.
Asi mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe, VaLoughty Dube, vaudza Studio7 kuti vanotenda zvaitika vachiti vakaita misangano yakawanda nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vachitaura zvavanoda kuti zvive mubhiri iri, asi handizvo zvakapinzwa mubhiriri iri.
Asi VaSibanda vati vachatora pfungwa dzevanhu dzose vachiti chinangwa chavo kuumba mitemo inofadza veruzhinji.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi vakaita saVaPhilbert Kufainyore, vati vanhu vachapinda muZimbabwe Media Commission kana kushanda mukomisheni iyi vanofanira kunge vari nyanzvi munyaya dzekutapwa nekufambiswa kwemashoko.
VaSibanda vati vachanzwa pfungwa dzemagweta kuti harusi rusarura here kudoma kuti munhu akamboita musoja kana mupurisa haafaniri kupinda kana kushanda mukomisheni iyi.
Komiti iyi ichanyora gwaro rezvakabuda mumisangano yavo uye ichatura gwaro iri kuparamende pachazeiwa bhiriri iri.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko rinotarisirwa kupinza pfungwa dzevanhu mubhiri iri risati rapasiswa kuve mutemo.